Mashruuca Marmaray CR3 Qandaraas: Gebze Halkalı Hagaajinta Laydhka Waddooyinka: Dhismaha, Korantada iyo Nidaamka makaanikada Shaqada | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMashruuca Marmaray CR3 Qandaraas: Gebze Halkalı Hagaajinta Gaadiidka Ganacsiga: Dhismaha, Qalabka Korontada iyo Mashiinka
Mashruuca Marmaray CR3 Qandaraas: Gebze Halkalı Hagaajinta Gaadiidka Ganacsiga: Dhismaha, Qalabka Korontada iyo Mashiinka
03 / 01 / 2011 34 Istanbul, Xaraashyada, DUNIDA, tareenka, GUUD, Isgaadhsiinta Tareenka Sare, Metro, Jadwalka Nidaamka Tareenka
Mashruuca Marmaray CR3 Qandaraas: Gebze Halkalı Hagaajinta Casriyaynta gaadiidka Tareenka: Civil & korontada & Farsamada Systems Business: Republic of Turkey Wasaaradda Gaadiidka General Directorate of Tareennada, dekadaha iyo Garoomada Dhismaha Guud ee Agaasinka (DLH)
Republic of Turkey, wasaaradda gaadiidka, Tareennada, Dekedaha iyo Maddaarada Dhismaha General Directorate - DLH (oran "Credit xisbiga" oran), baanka Maalgelinta Midowga Yurub (Antonov) iyo Golaha Bangiga Horumarinta Yurub (CEB) ilaa (halkan labadaba " Baanka wuxuu helay deyn kharashka Mashruuca Marmaray. Martiqaadkan caalamiga ah ee loogu talagalay hindisadaHalkalı Hagaajinta Xarrummada Dhulka: Dhismaha, Qalabka iyo Mashruuca: Heshiis CR3.
Mashruuca Marmaray waxaa ka mid ah hagaajinta nidaamka xeryaha ee hadda jira ee labada dhinac ee Bosphorus iyo dhisidda treen uu ka soo galo Bosphorus. Nidaamka cusub ee hababka tareenka, Gebze oo ku yaala dhinaca Asia ee Istanbul, dhinaca Yurub Halkalıilaa qiyaasta 77.
Mashruucan wuxuu u qaybsan yahay saddex qaybood:
(a) Heshiiskii Bosphorus Crossing (BC) (BC1): Heshiiska, oo wadarta guud ahaan qiyaastii 14 kilomitir dheer; Waxaa ka mid ah tunnel meel hoose ee xeebta Bosphorus iyo jihada xuddunta ee tunnel this, iyo saddex saldhigyada dhulka hoostiisa iyo saldhigga dusha sare ee jaantuskan. Heshiiskaan ayaa la filayaa in la dhammeeyo dhammaadka 2013.
(b) Heshiiska Tareenka (CR2) Heshiiska: Heshiiskaan, kaas oo daboolaya soo iibinta dhammaan gawaarida tareenada, ayaa la qorsheynayaa in lagu dhammaystiro dhammaadka 2013.
(c) Qandaraaska Qadka (CR3) Heshiiska: Qandaraaska ku xiran Wicitaanada Soo-jeedinta.
Qandaraaska CR3 waxaa hore loo siiyey oo loo bixiyay Heshiis CR1 (Juun 2007), laakiin Abriil 2010 waxaa la joojiyay shaqadii dhismaha oo aad u yar.
CR3 Shaqada heshiiska; iyo nawaaxigeeda A waa awoodda joogtada ah sare iyo line rakaabka ee ka mid ah dhinacyada Yurub iyo Asian ah ee nidaamka Istanbul (CR), an Intercity (IC) si ay u bixiyaan adeegyada rakaabka iyo gaadiidka xamuulka ah, dhismaha xilligan (in 14 kilomitir oo dherer ah) iyadoo la isticmaalayo heshiis BC1 ah, Istanbul Waxay ka kooban tahay naqshadeynta, wax ka qabashada iyo dhamaystirka nidaamka xeynaha fogaan-dheer ee 63 ee labada dhinac ee Bosphorus iyada oo la raacayo Shuruudaha Heshiiska ee FIDIC Silver Book EPC / Turnkey Projects
Si loo bixiyo ganacsi qancinaya, Halkalı - Nidaamka 3 ayaa lagu rakibayaa line 2 inta lagu jiro Heshiiska CR3 ee u dhexeeya Kazlıçeşme iyo Söğütlüçeşme-Gebze. Labada layn ayaa loo qoondeeyn doonaa shirkadaha CR. Sadarka saddexaad waxaa loo isticmaali doonaa tareenada laba-geesoodka ah iyo shirkadaha gawaarida xamuulka iyada oo la adeegsanayo khadadka gudbinta. CR, Adeegyada IC iyo kuwa soo gudbiyeyaasha socdaalka ayaa wadaagaya khadadka twin ee qaybta Convention BCX, laakiin tareenada CR ayaa la siin doonaa mudnaanta inta lagu jiro saacadaha ugu sarreysa.
Mashruuca CR3 wuxuu ka kooban yahay: Dib u cusboonaysiinta dhamaystirka laba xariiq oo xawaaraha 63 ee labada dhinac ee Bosphorus iyo dhismaha sadexaad sadexaad; Dhismaha 36 xarumaha dusha sare iyo kobcinta; dhisidda qiyaastii 130 waddo waddo cusub oo laga maro waddada, jidadka lugta iyo dhismaha moolalka (geesaha iyo kor-u-dhaafka iyo buundooyinka), laba kooxood oo si buuxda u shaqeynaya Xarumaha Xakamaynta Hawlaha (OCC) ee shirkadaha CR iyo IC; Bixinta goobo cusub, gardarrada iyo tas-hiilaadka dayactirka ee xarumaha CR iyo IC; Dib-u-habaynta dhammaan nidaamyada korantada ee dhererka guud ee 77 ee Mashruuca Marmaray, bixinta qalab koronto cusbooneysiin oo cusub 2, hagaajinta unugyada 4, tamarta ciriiriga ah, nidaamka signalka, nidaamka isgaarsiinta, kormeerka kormeerka iyo helitaanka xogta (SCADA) nidaamka iyo nidaamka mushaharka si toos ah, dhammaan baaritaanada lagama maarmaanka ah iyo hawlgelinta, 2 sanadlaha (oo loo dheereeyey 5), hawlaha tababarka iyo taageerada.
Shaqooyinka waxaa lagu fulin doonaa aag aad u firfircoon.
Heshiiskaan waxaa la rajeynayaa in la fuliyo laga bilaabo Abriil 2011 waxaana la buuxin doonaa si tartiib tartiib ah inta udhaxeysa 2013 iyo dhammaadka 2014.
Shuruudaha aqooneed ee loo isticmaali karo habka qiimeynta hindisada waa sida soo socota:
(a) hindise-bixiye oo leh hal shaqo, ama shirkad wadajir ah ama wada-hawlgal la mid ah oo ka kooban ugu badnaan shirkadaha 3, oo abaabulay una shaqeynaya hal hanti, oo uu ka mid yahay Hogaamiyaha Hogaanka ah ee si buuxda u maamula maaraynta Heshiiska,
(b) Mas'uuliyad wadajir ah iyo shakhsi ahaaneed ee labada Wada-Shaqe iyo lamaanayaasheeda ee wadaagyada wadajirka ah ama iskaashiga la midka ah;
(c) Mashruucyada wadajirka ah ama iskaashiyada la midka ah oo ka kooban Hogaamiye iyo hal kaliye, Wada-hawlgalaha Hoggaamintu wuxuu yeelanayaa saamiga 51 ee ugu yar ee wada shaqaynta ama iskaashiga iyo in kabadani ay leeyihiin saamiga 30 ee ugu yar. Waa in ay jirto farqi u dhaxeeya 10% inta u dhaxaysa qaybta Waalidiinta Hogaaminta ee wada shaqeynta ama iskaashiga iyo qaybta shirkadda.
(D) lammaane sare iyo laba saldhig hoosaad waa in hawgal wadajir ah ama urur la mid ah Partner Lead wadaag kale ama iskaashi ka mid ah ugu yaraan% 51 in mid ka mid ah deeq ay ugu yaraan% 30 's iyo shuraakada kale ugu yaraan% 10' s gaar ah Waxa ay noqon doontaa.
(e) Xaqiijinta in Lammaanaha Hogaanka ah uu bixin doono isaga oo matalaya Dammaanadda Lacageed ee Lagu Dalbaday Heshiiska. Qiimaha dammaanaddu waa 10% Qiimaha Qandaraaska.
(f) Qofka ganacsadaha ah, ama Wakiilka Hoggaaminta ee wada-shaqeyn wadajir ah ama iskaashi la mid ah, wuxuu yeelan doonaa waayo-aragnimo ballaaran oo maareynta iyo dhismaha mashaariicda tareennada, laga bilaabo Janaayo 1 2000. wuxuu ku guuleysan doonaa Qandaraaslaha Hoggaanka ee fulinta iyo dhameynta nidaamka tareenada 3. Laga bilaabo taariikhda soo gudbinta hindisaha, nidaam waa in la buuxiyaa oo ka badan 250% nidaamka labaad waa in la dhammaystiraa. Milkiilayaasha Mashruuca waa in la siiyaa tixraac ku qanacsan / dukumeentiyada caddaynaya waayo-aragnimadooda Qaad Qandaraaslaha ah ee fulinta mashruucyadan.
(G) The qaata cidda kaliya ama in ay dhacdo hawgal wadajir ah ama iskaashi la mid noqon Partner qaata Lead ah, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 iyo 2008-2009 (shan) ee sannadka maaliyadda ee waaxda gaadiidka waxay leeyihiin dakhliga celceliska sanadlaha ah ugu yaraan 800 million euros laga soo bilaabo naqshadeynta iyo dhismaha mashaariicda.
(h) Haddii ay dhacdo in hindise-bixiyuhu uu ka kooban yahay hal shaqo, ama shirkad wadajir ah ama iskaashi la mid ah, Wada-xaajoodka ayaa mas'uul ka ah heshiisyada caalamiga ah (tusaale ahaan shan) sannadka maaliyadeed 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 iyo 2008-2009. celceliska dakhliga sanadlaha ah ee Shirkadda Sharciga / Wada-Shaqeeye ee mashaariicda laga fuliyey wadamo kala duwan oo ka yimid waddanka ay si rasmi ah u diiwaan gashan tahay) ma noqon doonto wax ka yar 10% dakhliga guud ee sanadlaha ee sanadihii la soo dhaafay.
(Ii) hoggaami Partner iyo mashaariic u wada galaan ama iskaashi la mid ah oo ka kooban a oo deeq hal, kuwa taabacsan 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 iyo 2008-2009 (shan) ee sannadka maaliyadda ee waaxda gaadiidka ee design iyo mashruuca Ugu yaraan 120 laga bilaabo dhismaha dhismuhu waa inuu lahaadaa dakhli celcelis ahaan sanadkiiba € million.
(J) hoggaami Partner iyo laba la xidhiidha in hawgal wadajir ah oo ka kooban wadajir ah ama wax kale oo deeq, mid ka mid ah deeq ka 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 iyo 2008-2009 (shan) ugu yaraan 120 million euros sanadkii sano maaliyadeedka dakhliga. xulufadeeda Second 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 iyo 2008-2009 (shan) waxay yeelan doonaan ugu yaraan 35 million euros, dakhliga celceliska sannadlaha ah ee sannadka maaliyadda. Labada lacag ayaa laga heli doonaa naqshadeynta iyo dhismaha mashaariicda gaadiidka.
(k) Maareeyaha Mashruuca, oo mas'uulka ka ah hawlgalada maalin kasta ee naqshadeynta iyo fulinta shaqada, waa in ay bixiyaan Wada-Shaqe Wanaagsan haddii dalabku uu ka kooban yahay isku-dhaf ah ama wada-shaqayn la mid ah oo uu leeyahay ugu yaraan 30 sano oo khibrad xirfadeed ah, ugu yaraan 20 khibrad shaqo oo la mid ah hayso ugu yaraan 10 sannadkii waayo-aragnimada Mashruuca Qandaraaslaha ee Qandaraasle Lahaa ee Shaqooyinka noocaas ah, kakanaanta iyo qiimaha.
Codsiyada waxaa loo codsanayaa nidaamka "laba-baqshiile", halka labadaba macluumaadka Aqoonsiga / Dalabka Farsamada iyo Dalabka Maaliyadeed labadaba la soo gudbiyey, laakiin baqshado gaar ah. Marxaladda koowaad, Macluumaadka Xirfadaha iyo dukumiintiyada farsamada ah ayaa si furan loo furay. U hoggaansanaanta iyo u hoggaansamidda Marka uu Loo-shaqeeyuhu eego, Dhiirashooyinka Maaliyadeed ee dalbadaha bixiya dukumintiyada saxda ah ee qiimeynta iyo qiimeynta farsamada ayaa si furan u furan oo akhrinaya.
Qiimaynta waafaqsanaanta iyo u-qalmitaanka ay tahay in loo-shaqeeyuhu u sameeyo sida soo socota:
(a) Waa in la hubiyaa in mid kasta oo ka mid ah shuruudaha shuruudaha lagu sharraxay ay soo buuxiyeen Bidder, iyo
(b) Waa in la hubiyaa haddii soo gudbinta farsamo ay si buuxda u buuxiso shuruudaha loo-shaqeeyaha. Dalabyo aan habooneyn ama aan habbooneyn lama aqbalayo.
Codsadayaasha waa inay buuxiyaan mid kasta oo ka mid ah shuruudaha ku xusan qodobada (a) iyo (b) ee kor ku xusan, si markaa loo soo bandhigo qandaraaslayaasha si ay u gutaan qandaraaska. Qofka dalbaday inuu ka soo baxo mid ka mid ah shuruudaha kor ku xusan waxaa loo arkaa mid aan ku filneyn waana la soo celin doonaa ka hor inta aan la furin maaliyadda.
Qeyb ka mid ah Dukumiintiyada Gundhigga ah waxaa laga yaabaa in la iibsado ka dib markii codsiga loo soo gudbiyey cinwaanka hoos ku qoran iyo lacagta aan la soo celin ee TL 20.000 waxaa lagu dhajiyay magaca mashruuca [IBAN: TR5800 0010 0100 0003 5012 1017 XNUMX ee Bangiga Dhexe ee Wasaaradda Gaadiidka].
Waraaqaha qandaraaska waxaa laga heli karaa 09 August August 2010 cinwaanka lagu tilmaamey ugu yaraan 5 maalmaha shaqada kadib taariikhda lacag bixinta.
Dalbadayaasha waxaa lagu martiqaaday in ay ka qeyb qaataan kulanka ka hor-hindisada ah ee lagu qabanayo 15 September 2010 waxaana si aad ah loogu talinayaa in ay kaqaybqaataan. Faahfaahinta kulanku waxaa lagu bixiyaa Qodobka Qandaraaska.
Ammaanka dalabka ee € 1.000.000 (hal milyan) oo la kulma shuruudaha lagu caddeeyey Dukumeentiyada Dalabyada waxaa loo gudbin doonaa dalab kasta.
Dalabyada oo dhan waxay ku yaalaan "Gebze-Halkalı Hagaajinta Khadad-hoosaadka: Dhismaha, Korantada iyo Nidaamyada makaanikada: Soo jeedinta CR3 Qandaraaska kapalı waxaa loo gaarsiin doonaa cinwaanka soosocda 7 ugu dambayn 2011 Janawari 16.00.
Dalabaadka waxaa lagu furi doonaa 7 Jannaayo 2011 oo ah 17.00 cinwaanka hoos ku xusan ee joogitaanka Biders ee doorta inay kaqeybqaataan.
Cinwaanka iyo Xidhiidhka Xiriirka:
Wasaaradda Gaadiidka: Iskuduwaha Guud ee Tareenada, Isbaddelada iyo Meelaha Garoomada (DLH)
Wasaarada Gaadiidka (D) Block,
Taleefan: + 90 312 2031638
Fax: + 90 312 2031470
Heshiiska CR3 (Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Koofiyadaha Waddooyinka Xaafadaha
Gebze-Halkalı Hagaajinta Xarrumaha Bixinta
AYGM's Gebze-Haydarpaşa, Sirkeci-Halkalı Mashruuca Lacagta EIB ee Mashruuca Laga Qaybiyo Dhulka
Hagaajinta Xarrummada Dhaqdhaqaaqa iyo Saldhigyada 19 Bilawday Juun
Mashruuca Marmaray - Qandaraaskii1 Maajo 2012 Horumar Bil kasta oo ka socota Goobaha Dhismaha…
Marmaray Mashruuca-BC1 Heshiiska Oktoobar Horyaalka Bilowga Heerka Sayniska laga bilaabo goobaha dhismaha 2012
Marmaray Mashruuca-BC1 Heshiiska Febraayo ee Horumarinta Billaha ah Video oo laga bilaabo goobaha dhismaha 2013
Marmaray Halkalı-Gebze Gaadiidka Gaadiidka Gaadiidka La bilaabay
Razmir Nidaamka Xadiidka Xilliga Fudud ee Dawladda Hoose (Marxaladda 2)
Dhismaha Xargaha Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara - Dhismaha Kolin - Dhismaha Cengiz…
Marmaray Mashruuca CR3
Marmaray Mashruucyada horumarinta mashruuca Diseembar 2010
Ankara Metro 3. Marxaladda Necatibey Station Xarunta Qalabka Tunnel